1 KỌRINT 7 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (1KỌR 7)
1 KỌRINT 7
Ugbu a, achọrọ m ịsa ajụjụ ndị ahụ unu jụrụ nꞌakwụkwọ unu deteere m. Ndị a bụ ọsịsa m banyere ajụjụ ịlụ nwanyị. Ọ dị mma ma ọ bụrụ na nwoke emetụghị nwanyị aka.
Ka nwoke ọ bụla nwere nwụnye nye nwụnye ya ihe nile ruuru ya dị ka nwanyị nwere di. Nwanyị ọ bụla ga-emekwara di ya otu aka ahụ.
Nꞌihi na nwanyị ọ bụla lụrụ di adịkwaghị achị ahụ ya, kama ọ bụ di ya na-achị ya. Otu aka ahụ, di anakwaghị achị ahụ ya, kama ọ bụ nwụnye ya na-achị ya.
Anaghị m ekwu nke a ịkwagide unu ịlụ di na nwụnye, kama onye chọrọ ịlụ nwere ike lụọ.
Asị m kwuo, aga m asị na ọ ga-aka mma ka mmadụ nile nọrọ dị ka m ṅa-alụghị nwụnye. Ma onye ọ bụla nwere onyinye nke Chineke nyere ya. Ụfọdụ ka o nyere onyinye ịbụ di ma ọ bụ nwụnye, ndị ọzọ ka o nyere onyinye ịnọrọ onwe ha na-alụghị di ma ọ bụ nwụnye.
Ya mere geenụ ntị, unu ụmụ nwanyị nile na-alụbeghị di, na unu nile di ha nwụrụ anwụ, ọ ga-akara unu mma ịnọrọ nke onwe unu dị ka m.
Ma ọ bụrụ na ị pụghị ijide onwe gị, igbaso nwoke ma ọ bụ nwanyị, gaa chọrọ di ma ọ bụ nwụnye lụọ. Ọ ka mma ịlụ di ma ọ bụ nwụnye, karịa ịnọ na-alụghị di ma ọ bụ nwụnye na-anwụ nꞌihi agụụ inwe mmekọrịta nke nwoke na nwanyị.
Ugbu a, unu ndị nwere di na ndị nwere nwụnye nile, enwere m iwu m na-enye unu. Iwu a esighị nꞌaka m, kama o si nꞌaka Onyenwe anyị. O kwesịghị ka nwanyị ọ bụla hapụ di ya.
A sịkwa na nwanyị ọ bụla ahapụ di ya, ya nọọrọ onwe ya, ma ọ bụ ya laghachikwuru di ya. Nwoke ọ bụla ekwesịkwaghị ịchụpụ nwụnye ya.
Ka m tụnyetụ aro nke m. Ọ bụ ezie na ọ bụghị Chineke kwuru ha, kama ha ziri ezi nꞌanya m. Ọ bụrụ na onye kwere ekwe alụọ nwanyị nke na-ekweghị ekwe, ya achụpụla ya ma ọ bụrụ na nwanyị ahụ achọọ ịnọgide dị ka nwụnye ya.
Ọ bụrụkwa na nwanyị kwere ekwe alụọ di nke na-ekweghị ekwe, ya agbarala di ya achọkwaghị m, ma ọ bụrụ na di ya chọrọ ka nwanyị ahụ nọgide dị ka nwụnye ya.
Nꞌihi na a na-eme ka nwoke ahụ na-ekweghị ekwe bịarute Chineke nso site na nwụnye ya, otu a kwa a na-emekwa ka nwụnye ahụ na-ekweghị ekwe bịarute Chineke nso site na di ya. Nꞌihi na, ọ bụrụ na ha agbaara onwe ha achọkwaghị m, a ga-agụ ụmụ ha dị ka ndị na-amaghị Chineke. Ma ọ bụrụ na ha ebiri, a ga-agụ ha dị ka ndị dị nsọ.
Nꞌihi na gị nwanyị na-adọ ka di gị nọgide, gịnị nyere gị olileanya iche na di gị ga-emesịa kwere na Kraịst? Otu a kwa gị nwoke na-adọ ka nwụnye gị nọgide, olee otu i si mara na ị pụrụ ime ka nwụnye gị bụrụ onye Kraịst?
Bikonụ mgbe unu na-enwe mkpebi unu nꞌihe ndị a, ka onye ọ bụla na-ebi ndụ ya dị ka Chineke chọrọ ka o bie ya. Onye na-alụ di ma ọ bụ nwụnye, ya mee ya dị ka otu Chineke si duzie. Onye nke na-adịghị alụkwa, ya meekwa dị ka Chineke siri duzie ya. Nke a bụ iwu m na-enye nꞌụlọ chọọchị nile m gara.
Dị ka ihe ịma atụ, ọ bụrụ na ọ dị onye e biri ugwu tupuu ya anabata Onyenwe anyị, ka nke a hapụ iwute ya. Ka onye a na-ebighị ugwu hapụ inye onwe ya nsogbu, ịchọ ụzọ a ga-esi bie ya ugwu.
Nꞌihi na ọ dịghị mkpa ma e biri gị ugwu ma e bighị gị ugwu. Ọ dịghị ihe ndị a pụtara nꞌihu Chineke. Ihe dị mkpa bụ irube isi nꞌiwu Chineke na ime ihe na-atọ ya ụtọ.
Ka onye ọ bụla nọgide dị ka ọ dị mgbe a kpọrọ ya.
Ọ bụrụ na ị bụ ohu echegbula onwe gị nꞌihi ya. Kama ọ bụrụ na ọ dị ụzọ ị pụrụ isi nwere onwe gị, mee ya.
Nꞌihi na ọ bụrụ na Chineke kpọrọ gị mgbe ị bụ ohu, cheta na Kraịst emeela ka ị bụrụ onye nweere onwe ya site nꞌike mmehie. Ọ bụrụ na Chineke kpọrọ gị mgbe i nweere onwe gị, cheta na ị bụ ohu Kraịst ugbu a.
Kraịst akwụọla ụgwọ isi unu, unu bụ nke ya ugbu a. Ya mere, bienụ ndụ dị ka ndị nwe onwe ha, unu abụkwala ohu mmadụ ọzọ.
Echere m na ọ ka mma ugbu a, nꞌihi nsogbu na-adakwasị ndị Kraịst nꞌoge a, ka nwoke na nwanyị onye Kraịst ọ bụla nọọrọ onwe ya na-alụghị di ma ọ bụ nwụnye.
Ma ọ bụrụ na ị nwere di ma ọ bụ nwụnye, ahapụla ya, a sịkwa na ị bụ okokporo, emela ngwangwa ịchọ nwanyị ị ga-alụ ugbu a.
Ihe unu kwesịrị ịmata bụ na oge anyị nwere nꞌụwa a fọdụrụ nanị ntakịrị, nꞌihi nke a, ka ndị nwere di na nwụnye bụrụ ndị ji oge ha nile na-arụ ọrụ Chineke.
Ka ndị na-etinye oge nꞌihe ụtọ nke ụwa hapụ ibi ndụ ịchọ iritecha ihe nile dị nꞌụwa nꞌuru. Nꞌihi na ụwa a, otu ọ dị ugbu a, bụ ihe na-agabiga agabiga.
Nꞌime ihe nile unu na-eme, unu emela ihe ga-ewetara unu oke echiche. Nwoke na-alụbeghị nwanyị nwere ohere iji oge ya nile rụọra Onyenwe anyị ọrụ. O nwekwara ohere ịgbalịsị ike ime ihe ga-atọ Chineke ụtọ.
Ma nwoke nwere nwụnye enwezighị ohere ịrụrụ Onyenwe anyị ọrụ nꞌihi na echiche ya nile na ihe na-agụ ya agụụ bụ igbo mkpa dị nꞌezinụlọ ya, na ime ihe ga-atọ nwụnye ya ụtọ.
Ọ bụrụkwa na nwoke ọ bụla ekpebie ịlụ nwụnye nꞌihi na o siiri ya ike ijide onwe ya nꞌihi agụụ mmekọrịta nke nwoke na nwanyị na-agụ ya, o meghị mmehie ọ bụla ma ọ lụọ nwụnye.
Ya mere, onye ahụ lụrụ di ma ọ bụ nwụnye mere nke ọma, ma onye kpebikwara na ọ gaghị alụ mekwara nke ọma karịa.
1 KỌRINT 7:1
1 KỌRINT 7:3
1 KỌRINT 7:4
1 KỌRINT 7:6
1 KỌRINT 7:8
1 KỌRINT 7:9
1 KỌRINT 7:10
1 KỌRINT 7:11
1 KỌRINT 7:12
1 KỌRINT 7:13
1 KỌRINT 7:14
1 KỌRINT 7:16
1 KỌRINT 7:17
1 KỌRINT 7:18
1 KỌRINT 7:19
1 KỌRINT 7:20
1 KỌRINT 7:21
1 KỌRINT 7:22
1 KỌRINT 7:23
1 KỌRINT 7:26
1 KỌRINT 7:27
1 KỌRINT 7:29
1 KỌRINT 7:31
1 KỌRINT 7:32
1 KỌRINT 7:33
1 KỌRINT 7:36
1 KỌRINT 7:38